मुटु विझाउने घटना: ८ पढेको श्रीमानले श्रीमती डिग्री पढ्ने भइ भन्ने ईर्ष्याले हातका औला छिनायो ! यस्तो श्रीमानलाई के भन्नू हुन्छ । – ताजा समाचार
मुटु विझाउने घटना: ८ पढेको श्रीमानले श्रीमती डिग्री पढ्ने भइ भन्ने ईर्ष्याले हातका औला छिनायो ! यस्तो श्रीमानलाई के भन्नू हुन्छ ।
एजेन्सी । सुन्दापनि अचम्म लाग्छ । तर यो सत्य खबर हो । एक ईर्ष्यालु पतिले म मास्टर डिग्री मेहनत गरेर पढ्छु भन्ने सोचेर विश्वविद्यालय भर्ना भएकी पत्नीको एउटा हातका सबै औला नै छिनाईदिए ।
उक्त घटना यति हदसम्मको विभ’त्स छ की सुन्दा समेत सबैको आङ सिरिङ हुन्छ । उक्त दुष्कर्म गर्ने पति अहिले जे’ल जीवन भोगिरहेका छन् । उनकी श्रीमतीले अनुमतिबिना मास्टर डिग्री अध्ययन शुरू गरिन् । यही कारण जंगिएर उनले दाहिने आतका सबै औला नै का’टिदिए ।
३० बर्षका रफीकुल इस्लामले मात्र २१ बर्षकी आफ्नै श्रीमतीको औला छिनाएका हुन् । यति बर्बरतापूर्ण दुष्कर्म छ की उनले पत्नीको औला का’ट्नका लागि पत्नीको आँखामा पट्टी बाँधिदिए, मुखमा टेप लगाइदिए । भने आज म तिमिलाई सप्र्राईज दिँदैछु । श्रीमानको यो प्रताव मायालु लागेर उनले हात उनैको जिम्मा लागाईन् । लाडप्यारले शरिरनै उनीतर्फ अड्याईन् ।
त्यसपछि श्रीमान्ले आँखामा पट्टी बाँधिदिए, मुखमा टेप लगाइदिए । एकैछिनमा बज्रपात भयो । राक्षस श्रीमान्ले ५ वटै औला छिनाईदिए । एक झड्का नै उनका लागि अन्धकारमय भयो । उनका ५ वटै औला का’टिए । त्यति मात्र हैन की का’टिएका औला उनले फोहोरको थुप्रोमा लुकाईदिए । ता की फेरी डाक्टरको सहायताले ती औला जोड्न नपाउन् ।
उसले आफ्नी पत्नीलाई चेतावनी दिएको थियो । यदि पढाई सुरु गरे त्यसको परिणाम भयानक आउनसक्छ । घर आएपछि नभन्दै त्यस्तै भयो । द टाइम्समा लेखिए अनुसार उनी विदेशबाट घर आएपछि उनकी श्रीमतलाई अचानक, आँखा बन्द गर भन्यो । हात बाँधिदियो । मुखमा टेप लगाईदियो ।
उसले भन्यो की आज तिमिलाई म सरप्राइज गिफ्ट दिँदैछु । तर उसको सरप्राईज त्यही बन्यो । राक्षसले मेरा औला का’टिदियो पिडित युवतीले बताईन् । घटना बंगलादेशको हो । बांग्लादेशका पुलिस प्रमुख मोहम्मद सलाउद्दीनले बताए अनुसार श्री इस्लामलाई राजधानी ढाकाबाट गिरफ्तार गरिएको छ ।
सुश्री अख्टरले अहिले झनै संघर्षशील बनेकी छिन् । दाहिने हातका औला का’टिएपछि अहिले उनी देब्रे हातले देख्न अभ्यास गरिरहेकी छिन् । उनी देब्रे हातले लेख्ने अभ्यासमा चाँडै पोख्त भएकी छिन् ।
उनले पढाई फेरी सूरु गरेकी छिन् । जसरीपनि मास्टर डिग्री हासिल गर्ने र सरकारको उच्च ओहोदामा जागिर खाने उनको लक्ष्य जसरी नी पुरा गर्ने कार्यमा मेहनत गरिरहेकी छिन्ु । अहिले उनी आफ्ना माता–पिताका घरमा फिर्ता गएकी छिन् ।
अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : January 26th, 2020,